04 September, 2018 in Maqaallo by BANA Mogdishu Office
Waa cinwaan su'aal kugu beeraya, oo aad is weyddiineysay sidee bay caddaalad darro uga dhex jiri karta golaha wasiirrada? Haa. waa runtaa sidee bay caddaalad darro uga dhex jiri kartaa golihii wasiirrada qaranka? waa su'aasha u baahan in ja
Waa cinwaan su'aal kugu beeraya, oo aad is weyddiineysay sidee bay caddaalad darro uga dhex jiri karta golaha wasiirrada? Haa. waa runtaa sidee bay caddaalad darro uga dhex jiri kartaa golihii wasiirrada qaranka? waa su'aasha u baahan in jawaabta loo helo oo aad warbixintan u akhrineyso.
Haddaba golaha wasiirrada xukuumadda Kheyrre waxa ay iskugu jiraan saddex dabaqad oo mid kasta dabaqado kala leeyihiin.
1: Dabaqadda Koobaad :- Xoogya weynta, wasiirnimada lagu xaliyo:- iyada laftigeed ayaa u baahan sharaxaad, xoogya weyntu waa siyaasiyiinta dowladda ay ka baqdo islamarkaana saameynta lahaa, xukuumaddana ay u baahneyd in ay iska weeciso si aysan u qalalaaseen howlaheeda. xoogya weynta waxaa qeyb ka ah Cabdillahi Goodax Barre, wasiirka waxbarashada, Khadiijo Max’ed Diiriye wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliya iyo wasiirro kale oo uu Cabdi Xoosh Jabriil kamid yahay.
2: Dabaqadda Labaad:- Milkiillayaasha:- Ma milkiyad aan ra’iisul wasaare Kheyrre ahayn ayey xukuumaddu leedahay? waa su’aal, ha yeeshee ogoow in ay jiraan wasiirro xukuumadda ka tirsan oo aan dhihi karno waa milkiillayaasha dowladda, kana saameyn badan wasiirrada kale, wasiirradaas waxaa ugu muuq dheer wasiirka Qorsheynta qaranka mudane Jamaal Xasan Max’ed iyo wasiirro kale oo xukuumadda ka tirsan.
3: Dabaqadda Saddex aad:- La heystayaasha:- dabaqadda saddex aad waa dabaqadda aan tabarna lagu dooran, milkiyadna lahayn, balse reerahooda inta keensadeen loo magacaabay ama ugu yaraan Kheyrre uu u gartay xilkaas, ha yeeshee waxa ay la kulmaan dhibaatada ugu badan, maxaa yeellay iyaga ayaa ah kuwa musuqa lagu eedeeyo, sumcadda looga gubo, islamarkaana isku shaandheyntu qabato, haddaba halkee bay caddaalad uga dhex jirtaa golaha wasirrada Soomaaliya?